Alvaro Morata oo keliya ayaa dhibaatada dhanka weerarka ka saari kara Real Madrid | Ciyaarside.com
Alvaro Morata oo keliya ayaa dhibaatada dhanka weerarka ka saari kara Real Madrid
Real Madrid waxaa ku habboonaan laheyd inay dib usoo ceshadaan gooldhaliye Alvaro Morata si ay ugu xoojiso weerarkeeda oo haatan aad u liita isla markaana ay dhallintu saameyn ku yeelatay, sidaas waxaa laga soo xigtay joornaaliistaha khabiirka ah ee kubadda cagta La Liga ee Guillem Balague.
Morata ayaa wuxuu kasoo tegay Real Madrid isagoo kusoo biiray kooxda Chelsea xagaagii lasoo dhaafay – horyaalka England Premier League ayuuna wacdaro ka dhigayaa xilli ciyaareedkaan isagoo dhaliyey 8 gool 11 kulan oo uu ciyaaray.
Dhanka kale, Los Blancos ayaa xilli ciyaareedkaan ku dhibtooneysa horyaalka La Liga iyadoo ku jirta kaalinta 3aad isla markaana 10 dhibcood ka dambeysa hogaamiyeyaasha Primera Division ee Barcelona.
Joornaaliiste Guillem Balague ayaana daaha ka qaaday inuu Morata caawin lahaa Real Madrid haddii markii seddaxaad xirfaddiisa ciyaareed kooxda dib loogu soo celiyo.
Guillem Balague ayaa yiri: “Marka laga hadlo seddaxda weeraryahan ee ay haatan heysato Real Madrid – qorshuhu wuxuu noqonayaa ha laga warsugo.
“Bale ma doonayo inuu kooxda ka tago, wuxuuna aaminsan yahay inuu qaab ciyaareed wanaagsan soo bandhigi doono marka uu dhaawaca kasoo laabto. Kooxduna ma doonayo inay iibiso xagaaga soo aadan.
“Ronaldo wuxuu sheegay inuu doonayo inuu baxo ka hor ciyaarihii caalamiga ahaa, laakiin Florentino Perez ma doonayo inuu baxo, xagaagii lasoo dhaafay dalab uma imaan, qandaraaskiisana 1 bilyan oo ginni ayaa lagu burburin karaa, sidaas darteed meelna uma socdo.
“Sidaas darteed waa Benzema midka ay noqoneyso in la iibiyo. Laakiin Real Madrid ma heleyso lambar 9aad oo Benzema kaga habboon ka garab ciyaarista Ronaldo… Harry Kane oo ay dooneysay Real Madrid wuxuu sheegay inuu sii joogayo Tottenham. Eden Hazard haddii la keeno Real Madrid wuxuu booska kala baxayaa Isco. Sidaas darteed, Madrid axaa u fiicnaan laheyd inay dib usoo ceshadaan Morata”.